Deeq horudhac ah oo gelintii dambe maanta la gaarsiiyay degmada Bardaale | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Deeq horudhac ah oo gelintii dambe maanta la gaarsiiyay degmada Bardaale
Deeq horudhac ah oo gelintii dambe maanta la gaarsiiyay degmada Bardaale
Bardaale (Halqaran.com) – Guddiga gurmadka Fatahadyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gelinkii dembe khamiistii maanta lagu wareejiyay deeq ka timid wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka Dowladda Fedaralka Soomaaliya.
Deeqdaan ayaa isugu jirtay marakaneeco, teendhooyin,iyo Malmalaato.
Mas’uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa sheegay in deeqdaan loogu tala galey in la gaarsiiyo shacabka degmada Bardaale oo daadad kusoo rogmadeen.
Guddomiyaha Guddiga Gurmadka Fatahadyada Koonfur Galbeed ahna wasiirka gar gaarka maareynta iyo Masiibooyinka Dowlad Goboleedka KGS Cabdinaasir Cabdi Caruush ayaa sheegay in maanta degmada Bardaale ay geeyen deeq hordhac ah oo isugu jira daawooyin iyo raashin.
daad ku soo rogmay
Guddiga gurmadka fatahaadyada